Dalxiis Warshad - Nanjing Huade Qalabka keydinta Qalabka Warshadaha Co., Ltd.
Nanjing Huade Storage Equipment Manufacturing Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 1993. Waxaan nahay mid ka mid ah hormuudka iyo adeeg bixiyayaashii ugu horeeyey ee diirada saaraya naqshadeynta, been abuurka, rakibida nidaamyada keydinta otomaatiga ah iyo nidaamka qashinka lagu keydiyo
Iyadoo la adeegsanayo dadaal dadaal badan xubnaha HUADE, maalgashi joogto ah oo ku saabsan R&D, iyo shabakad ballaaran oo loo qeybiyo adduunka oo dhan, HUADE waxay ka soo baxday warshad wax jabisa una noqotay soo saaraha ugu weyn ee nidaamyada keydinta bakhaarada otomaatigga ah iyo nidaamyada qashin-qubka. Awood wax soo saar sanadle ah ayaa qiyaastii dhan 50,000 tan.
Maaddaama ay tahay qalab iyo shirkad-qeybiyaha, HUADE waxay leedahay koox xooggan oo R&D ah, xarumo wax soo saar xirfad leh iyo shaqaale xirfad leh. La-hawlgalayaasha adduunka oo dhan, HUADE waxay si joogto ah u cusbooneysiisaa alaabada, teknolojiyadda iyo adeegyada si loo buuxiyo shuruudaha macaamiisha. Dhammaan alaabooyinka la sameeyay waxay la jaan qaadayaan heerarka warshadaha caalamiga ah, tusaale ahaan, heerarka Euro ee FEM, Australiyaanka, heerarka Mareykanka.
Waxaa jira 5 warshad oo shaqeyneysa iyo warshad cusub oo ah Shaybaarka. alaabada iyo tijaabinta nidaamyada keydinta otomaatiga ah.
Noocyada kala duwan ee alaabada wax lagu duugo iyo nidaamyada keydinta otomaatiga ah waxaa soo saari kara in ka badan 200 nooc oo mashiinno ah iyo khadadka wax soo saarka ah, sida:
2 maya. ee khadadka wax soo saarka shelf 20 maya. ee khadadka tooska ah & khadadka duudduuban ee sameynta qoraalada
10 maya. oo ah khadadka duudduuban ee tooska ah ee looxyada 6 maya. ee daaweynta hore dusha iyo khadadka dufanka budada ah ee electrostatic otomaatig ah
5 maya. ee mashiinnada alxanka alwaaxa robotka ah 2 maya. khadadka wax soo saarka sariirtaada birta ah
60 maya. ee mashiinada alxanka kaarboon laba ogsaydhka 50 lambar. mashiinada goynta, foorarsiga iyo feerista
1 maya. oo ka mid ah 500 tan oo saxaafadeed Haydarooliga ah 5 maya. ee xarumaha makiinadaha CNC
QC:Badeecad kasta waxaa hubin doona shaqaalaha marxaladda ugu horreysa, ka dibna xirmo kasta oo ka mid ah alaabooyinka waa in lagu kormeeraa baaritaanka muunadda.
Tijaabinta iyo cabbiraadda qalabka iyo qalabka ayaa la heli karaa, sida mashiinka siligga, tijaabiyaha buufinta milixda, mikro mitirro, calipers, dherer, xagal, cabirrada dhumucda iwm.